I-Liftside Retreat - I-Airbnb
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Toby & Lauretta
I-Liftside Retreat iyikhaya eliyingqayizivele lokulala elingu-3 lokugezela i-Mountaineer futhi inakho konke ongakufuna ngeholide elihle lezintaba. I-Liftside Retreat iqhele ngezinyathelo ezimbalwa nje ezimfushane ukusuka ku-Snowflake Chair lift ekunikeza kalula ukungena nokuphuma eqhweni futhi nokho iseduze kakhulu nedolobha elizansi nedolobha kanye nesitobhi samahhala samabhasi kanye.Leli khaya linohlelo lokuhlanza umoya lwe-HEPA.
Jabulela ukubukwa kwentaba okumangalisayo okuvela egumbini lokuhlala, kuvulandi kanye negumbi lokulala elikhulu. Leli khaya elithandekayo ledolobhana libanzi futhi livulekile futhi linendawo eningi yokuba umndeni wakho uphumule nezindawo ezimbili zokuhlala.Izinga eliphezulu lendawo yokuhlala livulela ikhishi nendawo yokudlela futhi lihlotshiswe kahle ngalowo muzwa wangempela wokushushuluza. Zifudumeze ngemva kohambo losuku ngendawo yomlilo yegesi ethokomele ngenkathi ubuka izinhlelo zakho eziyintandokazi ku-TV enkulu yesikrini esiyisicaba. Phuma ungene kuvulandi ukuze uthole ukubukwa, umoya ohlanzekile wasezintabeni noma ukosa iziteki ukuze uthole isidlo sakusihlwa.
Ikhishi livuselelwe kahle ngezinto zensimbi ezingenasici kanye ne-backsplash yengilazi enhle. Itafula lokudlela lihlala eziyisithupha, kodwa lineqabunga elakhelwe ngaphakathi elishelelayo ohlangothini ngalunye ukuze uthole indawo eyengeziwe. Kukhona nezihlalo zamabha ezi-4 endaweni yokucima ukoma.
Indawo yokuhlala yesibili inosofa wesigaba esihle, i-TV enkulu yesikrini esiyisicaba kanye netafula eliyindilinga elilungele ukudlala imidlalo. Kukhona indlu yokugezela engu-3/4 eduze nendawo yokuhlala yesibili.
Igumbi lokulala elikhulu linombhede wenkosi onohlaka olunamandla lwelogi, i-TV yesikrini esiyisicaba, igumbi lokugezela le-en suite elinamasinki akabili, ubhavu omkhulu wejethi kanye neshawa ehlukene. Izintaba zingaba yinto yokuqala oyibonayo lapho uvuka ekuseni. Lalela imisindo epholile yomfula ngaphambili ehlobo.
Igumbi lesibili lokulala linombhede wendlovukazi othokomele, i-TV yesikrini esiyisicaba futhi ungakwazi ukufinyelela kubhavu oshisayo wangasese ukuze uthole ukuphumula okudingekayo kakhulu ekupheleni kosuku.
Igumbi lesithathu lokulala liyigumbi lokuhlala elinemibhede emibili engaphezu kwemibhede emibili. Kunendlu yokugezela yalawa magumbi amabili azokwabelana ngawo kuleli zinga. Kukhona futhi usofa we-queen size sleeper egumbini lokuhlala elisezingeni eliphezulu lendawo yokulala eyengeziwe.
Kunemoto engu-1 enamathiselwe igaraji elishisayo elinewasha nokomisa ukuze kube lula kuwe. Imoto eyengeziwe ingapaka ku-driveway. Leli khaya ledolobha lingamazinga ama-3 futhi linezitebhisi.
Ilayisensi Yebhizinisi LaseBreckenridge# 45559
Ibungazwe ngu-Toby & Lauretta